မြန်မာ ပြည်သား မှန်သမျှ ဖတ်သင့်သော…. ပေါ်ပေါက်လာသည့် အစိုးရ…… | My Diary
← Tongsan leh Tun Tun (IC) Holimna	မြန်မာ့သတင်းစာများတွင် မပါသော သတင်းနှင့် ပုံ →	မြန်မာ ပြည်သား မှန်သမျှ ဖတ်သင့်သော…. ပေါ်ပေါက်လာသည့် အစိုးရ……	Mar 1
ရွေးကောက်ပွဲလွန်ကာ ပေါ်ပေါက်လာမည့် သိန်းစိန် အစိုးရ
ရွေးကောက်ပွဲလွန် ကာလတွင် NLD မှ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် လွတ်လာသည့် အပေါ် ထိပ်တိုက် ရင်ဆိုင်ရေးထက် အမျိုးသား ပြန်လည် သင့်မြတ်ရေး လမ်းစဉ်ကိုချမှတ်ပြီး တစိုက်မတ်မတ်ပြောလာခဲ့သည်။ တဖက်မှလည်း ရွေးကောက်ပွဲကို တရားမျှတမှု ရှိလိမ့်မည်၊ မိမိတို့ ကျိုးစားလျှင် အနိုင်ရ ရှိနိုင်သည်ဟူသည့် မျှော်လင့်ချက်တို့ ဖြင့် ရွေးကောက်ပွဲ ၀င်ခဲ့ကြသည့် ပါတီများနှင့် တသီး ပုဂ္ဂလများသည် ၄င်းတို့ မျှော်လင့် သလို ဖြစ်မလာဘဲ ဗြောင်လိမ်၊ဗြောင်မဲခိုး သည့်လုပ်ရပ်များကို မျက်ဝါးထင်ထင် တွေ့ မြင်ရသည့်အခါရွေးကောက်ပွဲကို ထောက် ခံမိသည်ကို နောင်တရကြပြီး NLD နှင့် ပူးပေါင်းလိုကြောင်း ပြောကြားခဲ့ကြသလို မသန့်ရှင်းသည့် ရွေးကောက်ပွဲ ကိုလည်း အသိအမှတ် မပြုကြောင်း ကြေငြာခဲ့ကြသည်။
တဖက်မှလည်း တတိယ အုပ်စု ဆိုသည့် အမည်ဖြင့် ရွေးကောက်ပွဲပေါ်ထင် ညစ်ပတ်မှုများကို လစ်လျှူရှုပြီး မြန်မာ နိုင်ငံကို စီးပွါးရေး ပိတ်ဆို့ ထားမှုကို ရုတ်သိမ်းရန် လိုအပ်ကြောင်း ရွေးကောက်ခံ လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်များနှင့် အဝေးရောက် ပညာတတ်အမည်ခံတို့က တစိုက်စိုက်မတ်မတ် ပစ်မှတ်တစ်ခုအဖြစ် တောင်းဆိုပြီး ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည်ကို ဘေးကြပ်နံကြပ် ဖြစ်လာစေရန် ဖိအားပေးပြီး ချောင်ပိတ်ရန် ကြိုးစား လာကြသည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကလည်း စိးပွါးရေး ပိတ်ဆို့ ထားမှုနှင့် ပတ်သက်၍ စစ်အစိုးရနှင့် ဆွေးနွေး အဖြေရှာလိုကြောင်း ကမ်းလှမ်းခဲ့သော်လည်း ဗိုလ်သန်းရွှေတို့က တစုံတရာတုန့်ပြန်မှု မပြုဘဲ လစ်လျှူရှု ခဲ့သည်။ NLD ပါတီကို တရားမ၀င် ကြေငြာခြင်းမှ ပယ်ဖျက်ရန် ဥပဒေ ကြောင်းအရ ဗဟိုတရားရုံးချုပ်သို့ ဦးတည် လျှောက်ထားခဲ့သော်လည်း စစ်အစိုးရ၏ ဗဟိုတရားရုံးရုပ်သေးအဖွဲ့မှပယ်ချခဲ့ပြန်သည်။
ထိုအခါ အမျိုးသား ပြန်လည် သင့်မြတ်ရေး လမ်းကြောင်းအရ NLD ဖက်မှ အစစ အရာရာသဘောထားကြီးပြီးလျှင် တွေ့ ဆုံ ဆွေးနွေး ရင်ကြားစေ့ရေးကို လိုလား သဖြင့် အလှော့ပေး သည်းညည်းခံမှုကို ဗိုလ်သန်းရွှေ တို့က ဒင်းတို့ငါတို့ကို ဘာမှ မလုပ်နိုင်ပါဘူးဟုတင်းမာမြဲတင်းမာနေသည်။
အမျိုးသား ပြန်လည် သင့်မြတ်ရေး လုပ်ငန်းသည် တဖက်သတ် အလျှော့ပေးရေး မဟုတ် ဆိုသည်ကို သဘောပေါက်စေရန် NLD မှ စီးပွါးရေး ပိတ်ဆို့ထားမှုသည် ဆက်လက် တည်ရှိရန် လိုအပ်သည်။ စစ်အစိုးရဘက်မှ အပြုသဘောဆောင်သည့် ပြောင်းလဲမှု တစုံတရာ မရှိဘဲလွှတ်မပေးသင့်ကြောင်းမကြာမီကထုတ်ပြန်ကြေငြာခဲ့သည်။
ကျွန်ုပ် အနေနှင့် NLD သည် လမ်းမှန်အပေါ်သို့ ပြန်လည်ရောက်ရှိလာသည်ဟု မြင်သည်။ အမျိုးသားရင်ကြားစေ့ရေးသည် NLD မှ တဘက်သတ် နအဖ အုပ်စု လုပ်သမျှ ခေါင်းငုံ့ခံ ၍ မြှောလိုက်ခြင်း မဟုတ်။ အမျိုးသားရင်ကြားစေ့ရေး သည် NLD ဖက်မှ လျော့သလို နအဖ ဘက်မှလည်း လျော့ချညှိနှိုင်း ဆက်ဆံလာရေးပင် ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် နအဖ ဘက်မှ ငါ့မြင်း၊ ငါစိုင်း စစ်ကိုင်း ရောက်ရောက် လုပ်နေသမျှ NLD အနေဖြင့် ပြည်သူအားကိုယူ၍ ဖိအားပေးဖို့လိုပေသည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်မရှိခင်နှင့် ရှစ်လေးလုံး အရေး အခင်း မဖြစ်ခင်ကပင် မြန်မာ နိုင်ငံသည် သယံဇာတ ပေါကြွယ်ဝသော နိုင်ငံဘ၀ ၊ပညာတတ်များ ထွန်းကားပေါက် ပွါးရာ ပွဲလည်တင့်သည့် နိုင်ငံတစ်ခု ဘ၀မှ စစ်အာဏာရှင်များ၏ ကိုယ်မကျွမ်းကျင်သည့် တိုင်းပြည်၏ စီးပွါးရေး၊ နိုင်ငံရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ တို့ကို လက်ဝါးကြီးအုပ်၍လွဲမှားစွာ ၄င်းတို့ ကုိုယ်ကျိုးစီးပွါးအတွက် အုပ်ချုပ်ခဲ့၍ မြန်မာ နိုင်ငံသည် ကမ္ဘာ့ လူမွဲ စာရင်းဝင် နိုင်ငံ တနိုင်ငံ ဖြစ်လာခဲ့ရသည်မှာ ၁၉၈၇ ခုနှစ် မှ စတင်၍ ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် မြန်မာ နိုင်ငံ လူမွဲ နိုင်ငံ ဖြစ်နေသည်မှာ စီးပွါးရေး ပိတ်ဆို့မှု မရှိခင်တင်ကတည်းက ဖြစ်ကြောင်း အများသိဘို့လိုသည်။ စီးပွါးရေးဖွင့်လာသည်ဆို သော ယနေ့စီးပွါးရေး စနစ်သည် စစ်အုပ်စုများ လက်ဝါးကြီးအုပ် ဝေစားမျှစားစီးပွါးရေးစနစ်ဖြစ်သည်။
ပြည်သူ အတွက်စီးပွါးရေး ဖွင့်ထားသည် မဟုတ်။ ၄င်းတို့ အတွက် တိုင်းပြည် သယံဇာတ များကိုဝင်ငွေလိုပြောင်း၍ ရရန်ဖွင့်ထားသည့် စီးပွါးရေး စနစ်ဖြစ်သည်။ ဗိုလ်သန်းရွှေတွင် သဘာဝဓါတ်ငွေ့ ရောင်းရငွေ နှစ်စဉ် ၄ ဘီလီယံ (ဒေါ်လာသန်း- ၄- ထောင်) သည်မြန်မာ ပြည်သူများ၏ ကျန်းမာရေး ပညးရေး စီးပွါးရေးတို့ကိုကောင်းကောင်း မြှင့်တင်ပေး နိုင်သည့် ၀င်ငွေ ဖြစ်သည်။ ထိုမျှမကသော စီးပွားရေးအခွင့်အလမ်း – business opportunity သည် ယနေ့ စစ်ဘက်မှသာ အကုန်ယူထားသည်ချည်းဖြစ်သည် ။ ထိုအတွက် နအဖ သည်မည်သည့်စကားမျှ မဆို ။ ဗြောင်ပင် လက်နှက်ရှိ၍ တိုင်းပြည်ကို ချယ်လှယ်နေသည်မှာ လွန်စွာသိသာသည် ။
၁၉၉၀ ရွေးကောက်ပွဲပြီးနောက် န၀တ၊ နအဖ တို့က ရေငုံ နှုတ်ပိတ် NLD ရွေးကောက်ပွဲ အနိုင်ရမှုကို ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပပေးသည့် န၀တမှချီးကြူး ဂုဏ်ပြုမှုအလျှင်း မရှိဘဲ ၊ဗိုလ်ချုပ်စောမောင်က `“ကျုပ်တို့ ရွေးကောက်ပွဲကို သန့် သန့် ရှင်းရှင်း လုပ်ပေးခဲ့တာပဲ” ဟုသာပြောခဲ့ပြီး သူပြောခဲ့သည့် မိန့် ခွန်းအရ `“ဘယ်သူနိုင်နိုင်၊ နိုင်တဲ့ သူကို အာဏာလွှဲပေးပြီး စစ်တန်းလျားသို့ ပြန်မယ်” ဆိုသည့် စကားကိုမေ့ချင်ယောင်ဆောင်၍ အခြေခံဥပဒေ မရှိသောကြောင့် အာဏာ လွှဲပြောင်း မပေး နိုင်သေးကြောင်း ပြောဆိုလာ ခဲ့သည်။ ထိုအခြေအနေတွင် လူထုကြီးကလွန်စွာတက်ကြွနေသည်။ NLD ဘာလုပ်လုပ် နောက်က အသေခံ၍ လိုက်မည့် သဘော ဖြစ်သည်။ သို့ရာတွင် ပြည်သူ လူထု မျှော်လင့် သလို NLD ပါတီသည် အရှိန်တက်နေသည့် ပြည်သူ့ ဆန္ဒကို ဆုပ်ကိုင်ဖမ်းယူမည် ဦးဆောင်ရမည့်အစား ဂန္ဓီ ခန်းမ ညီလာခံတွင် တကယ်လုပ်သင့်သည့် ထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင် ပြီး အစိုးရ အဖွဲ့ကို သတ္တိရှိရှိ ဖွဲ့စည်းပြီး ထောင်ထဲသို့ အစိုးရ အဖွဲ့ ဝင်များ တန်းစီဝင်ရ၊ ၀င်ရ ၀င်မည်ဆိုသည့် သတ္တိမမွေး နိုင်ခဲ့သဖြင့် ပြည်သူ့ အားဖြင့် အရှိန်ကောင်းကောင်း တိုက်ပွဲ ၀င်နိုင်သည့် အခွင့်အရေး ကောင်းကြီးကို လက်လွတ်ခဲ့ရပြန်သည်။
၁၉၉၀ လွှတ်တော် အမတ်များ အစိုးရ ဖွဲ့ ရန် ကြံစည်မှုဖြင့် နောက်ပိုင်း အဖမ်းခံရပြီး ထောင်တွင်း သေသူသေ၊ နယ်ခြားပြေး၍ အဝေးရောက် အစိုးရ ဖွဲ့ သူဖွဲ့ ဖြင့် ၁၉၉၀ ရွေးကောက်ပွဲ ရလာဒ်သည် ဇာတ်မြောကြီး ဖြစ်လာခဲ့ရသည်။ ပြည်ပရောက် ၁၉၉၀ အမတ်များသည် ရွေးကောက်ပွဲရလာဒ်ကို အကောင်အထည်ဖော်ဖို့ ထက်ရွေးကောက် ပွဲရလာဒ်ကို အသုံးချပြီး လိုင်စင်ရ ရာသက်ပန် ၀န်ကြီးချုပ်များ၊ အမတ်များ ဖြစ်လာခဲ့ကြသည်။ `“အပြင်လူ မ၀င်ရ” ဆိုသည့် ဆောင်ပုဒ်ဖြင့် ၁၉၉၀ လွှတ်တော်အမတ်များသည် ၄င်းတို့က သာ အစိုးရ ဖွဲ့ ပိုင်ခွင့် ရှိသည်။ အခြားသူများလာလျှင် ၁၉၉၀ ရွေးကောက်ပွဲရလာဒ်ကို ဖျက်ဆီးရာ ရောက်သည်ဟု ခြံခတ် နိုင်ငံရေးဖြင့် အစိုးရ အမည်ခံ NGO တပိုင်း ဖြစ် လာ ကြသည်။
လက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေး အကြောင်းပြောလျှင် တီကောင်ကို ဆားနှင့် ပက်သလို တွန့်သွား တတ်ကြသည်။ ထောက်ပန့် ကြေး အဖြတ်ခံရမည်စိုးသဖြင့် တော်လှန်ရေး စကားကို မပြော ရဲကြ။ အမှန်စင်စစ် ၁၉၉၀ ရွေးကောက်ပွဲ ရလာဒ်ကို အသုံးချပြီး တော်လှန်ရေး နယ်မြေရှိ တိုင်းရင်းသား တော်လှန်ရေး အင်အားစုများနှင့်မပူးပေါင်းဘဲ ခြံခတ် နိုင်ငံရေး လုပ်နေ ခြင်း ကသာ ၁၉၉၀ ရွေးကောက်ပွဲ ရလာဒ်ကို ဖျက်ဆီးနေခြင်း ဖြစ်သည်။
မင်းကိုနိုင် ၊ ကိုကိုကြီး၊ မင်းဇေယျာ၊ဌေးကြွယ်၊ ဂျင်မီ၊ မြအေး၊ စသော ၈၈-မျိုးဆက် ခေါင်ေးဆာင်များ နှစ်ပေါင်း ၁၆နှစ်- ၁၈ နှစ်ကြာ ထောင်နန်းစံ ဘ၀ လွတ်မြောက် လာပြီးနောက် မျိုးဆက်ပြတ်တောက်မှုကို ဦးတည် လုပ်ဆောင်လာမှုထက် NLD နှင့် ပူးတွဲ လုပ်ဆောင်လာမှုကို လွဲမှားစွာ လုပ်ခဲ့ကြသဖြင့် နအဖ၏ သတ်ကွင်းထဲသို့ ပြန်လည် ၀င်ရောက်သွားခဲ့သည်။ NLD လုပ်ရပ်ကို ထောက်ခံသည်ကို မငြင်းလိုပါ။ သို့ရာတွင် ၈၈ -ခေါင်းဆောင်များသည် သမိုင်းရှိသည်။ မိမိကွန်ယက်ကို မိမိတည်ဆောက်ရမည့်အစား NGO များ အဖြစ် အထင်ခံရမည်ကို သေးသိမ် သည်ဟု အယူအဆ မှားခဲ့ကြသည်။။စင်စစ် ၈၈ မျိုးဆက်များ၊ နောင်မျိုးဆက်သစ်တို့ နှင့် ကွင်းဆက်ချိတ်နိုင်ရန် ပေါ်လစီ မရှိခဲ့ခြင်းနှင့် လူမှုရေး လုပ်လျှင် နိုင်ငံရေး သိက္ခာ ကျသွားလေမလား ဆိုသည့် စိုးရိမ် မှုတို့က နောက်တကြိမ် ထောင်နန်းစံမှုကို ဖြစ်ပေါ်စေသည်ဟု သုံးသပ်သည်။ ယနေ့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် လူမှုရေး ကိစ္စများကို ထဲထဲဝင်ဝင် ၀င်ရောက် ကူညီသည်ကို ကြည့်လျှင် ထိုစဉ်က ၈၈-မျိုးဆက်တို့ လူမှုရေးဝင်ရောက် လုပ်ကိုင်လျှင် ၂၀၁၀ ခုနှစ်တွင် လူထု အခြေပြု ခေါင်ေးဆာင်များ ပြည်သူလူထုကြီးကိုစည်းရုံးပြီး သော လူများဖြစ်နိုင်သည်။
၈၈-မျိုးဆက်ကို ၈၈-လွန် ၉၆ မျိုးဆက်တို့ သိကောင်းသိမည်။ ၁၉၉၀- ခုနှစ်မွေးသော ယနေ့၂၀၁၀ မျိုးဆက် လူငယ်များ ကြားဖူးယု့သာ ကြားဖူး ကြမည်ဖြစ်သည်။ ပြည်တွင်းရှိ လူငယ် တယောက်က `“မင်းကိုနိုင် ” အမည်ကြားသည့် အခါ စတီရီယို အဆိုကျော် မဟုတ်လားဟု မေးသည်ဟု ပြောသံကြားဖူးသည်။
ကိုကျော်သူနှင့် မဇီးကွက်တို့ နာရေး ကူညီမှု အသင်းသည် အလွန်အောင်မြင်သည်။ ပြည်သူ့ လေးစားမှုကို ရသည့် ၈၈-မျိုးဆက် အနေနှင့် လွတ်လာသည့် ၁၉၉၆ ခုနှစ်မှစ၍ လူမှုရေးကိုဇောက်ချ လုပ်လျှင် ၂၀၁၀ သည်ပွဲကြီး ပွဲကောင်း နွှဲ နိုင်သည့် အနေအထားတွင် ရှိနိုင်သည်။
ယနေ့ ၈၈-မျိုးဆက်ခေါင်းဆောင်များ`“သူ့ စိတ် နှင့် ကုိုယ့်ကိုယ် ထောက်မင်းသား များဘ၀ ” ရောက်ရသည်မှာအလွန်ဝမ်းနည်းစရာကောင်းသည်။
” ၄င်းတို့၏ စွန့်စားမှုကို လေးစားပါသည်။ ၄င်းတို့ ယခုကဲ့သို့ ခံစားနေရခြင်းကို ကြားသိပြိး အမြဲ ယူကြုံးမရ ဖြစ်မိသည်။ အလွန် တန်ဘိုးရှိသော အနာဂါတ် ခေါင်းဆောင်များထောင်တွင် မဆုံး ပါးသွားကြပါစေရန်ဆန္ဒပြုပါသည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် လုပ်ရပ်များကိုကြည့်ပါ။ သူမ လုပ်နိုင်သမျှလုပ်ခဲ့သည်။ ပြည်သူ လူထုနှင့် ထိတွေ့ ဘို့ ကြိုးစားတိုင်း သူမ ပါသော ရထားတွဲ ကိုဖြုတ်ချ ချန်ထားခြင်းခံခဲ့ရသည်။ သူမ ပါသောကား တံတားထိပ်တွင် ပိတ်၍ ထားသဖြင့် ကားထဲတွင် ၇-ရက်မျှနေခဲ့ရသည်။ ဒီပဲယင်း အရေး အခင်းတွင်သူမ အသက်ကိုပင် ရန်ရှာ လာခဲ့သည်။ သူမ လုပ်နိုင်သလောက် လုပ်သလို နအဖ ကလည်း အပြတ် လိုက်ပိတ်သည်။ နောက်ဆုံး အသေ သတ်ဖို့ ကြ။ိုးစားသည်မှာ အများ အသိပင် ဖြစ်သည်။
ဒေါ်စုရှိလျှင် ပြည်သူကို ဦးဆောင်ပြီး နအဖကို တွန်းလှန် နိုင်သည်ကို ဗိုလ်သန်းရွှေ ကောင်းကောင်းသိသည်။ ထို့ကြောင့်ဒေါ်စုကို နေအိမ် အကျယ်ချုပ်ဖြင့် ၁၅-နှစ် ခန့် ထားခဲ့သည်။
အဓိက တရားခံမှာ အန်ကယ်ကြီးများ အုပ်စုသာ ဖြစ်သည်။ နအဖ အကြိုက်ခေါင်းငုံ့ လိုက်နေသော အန်ကယ်ကြီးများသည် NLD နှင့် ပြည်သူ့အင် အားစုတို့ကို ဖျက်ဆီးခဲ့သည့် ရွှေ ပြည်အေး သမားများသာ ဖြစ်သည်။ NLD ပါတီ တည်ရှိမှု မပျက်ရန် ဆိုသည့် အကြောင်း ပြချက်ဖြင့် တက်ကြွသည့် NLD လူငယ်များကို အဖွဲ့ မှ ထုတ်ပယ်ခြင်း၊ လူထု လှုပ်ရျားမှု များတွင် မပါဝင်ဘဲ မျက်စိမှိတ်နေခြင်းဖြင့် NLD ပါတီသည် အင်အား ယုတ်လျှော့ ခဲ့ရသည်။
နအဖ၏ပြင်းထန်သော ဖိနှိပ်မှု ညစ်ပတ်မှုများကလည်း တဖက်တွင်ရှိနေသည့် အတွက် ၄င်း အချက် ၂ ခုပေါင်းလိုက်သောအခါ NLD ပါတီနှင့် အဖွဲ့ဝင် သန်းဂဏန်းမှသောင်းဂဏန်း အဆင့်ကျရောက် လာခဲ့ရသည် ကို မည်သူမျှ မငြင်းနိုင်ပါ။
NLD ပါတီ သည် တရားဝင် ပါတီအဖြစ် အသိအမှတ် ပြုမှု မရှိတော့ချေ။ သိန်းစိန် အစိုးရ တက်လာ သည့်အခါ NLD ပါတီ ကို တမျိုး လှည့်ပြီး မှတ်ပုံတင်လျှင် နိုင်ငံရေး ပါတီ အဖြစ် အသိအမှတ် ပြုမည်ဟု ချဉ်းကပ် လာနိုင်သည်။ သန်းရွှေ။ သိန်းစိန် တို့မှ မသိအမှတ် ပြုပြု- မပြုပြု ပြည်သူက NLD ပါတီ ကို အသိအမှတ် ပြုနေမည်သာ ဖြစ်သည်။ အထူးသဖြင့် ဒေါ်စုက ဦးဆောင်လျှင် ပြည်သူတို့က NLD ပါတီ ကို ပြည်သူ့ ပါတီ အဖြစ်လူထုက လက်ခံမည်မှာလွန်စွာသေချာသည် ။
NLD ပါတီ အနေဖြင့် ချဉ်းကပ်နည်း ၂ မျိုးဖြင့် ချဉ်းကပ်နိုင်သည်။
အတွင်း အပြင် ချဉ်းကပ်နည်းဆိုလျှင် မမှား နိုင်ပါ။ အတွင်းမှ ချဉ်းကပ်ခြင်း ဆိုသည်မှာ လွှတ်တော်တွင်း ရောက်ရှိနေသော ဒီမိုကရေစီ အင်အားစုများ၊ တိုင်းရင်းသား အင်အား စုများ၊ နှင့် ချစ်ကြည် ရင်းနှီးမှု ရယူပြီး လွှတ်တော်တွင်း တိုက်ပွဲများကို ပြင်ပမှ အားပေးခြင်း၊ ကူညီခြင်းတို့ဖြင့် မတရား ဥပေဒေများကို တိုက်ဖျက်၍ ဒီမိုကရေစီနည်းလမ်းကျ ဥပဒေတို့ကို ပြင်ဆင်ခြင်း ဆိုသည့် ဘောင်တွင်းက တိုက်ပွဲဖော်နည်းဖြင့် ချဉ်းကပ် ခြင်းကို အားပေး ကူညီခြင်းဖြင့်ခိုင်မာသောမဟာမိတ်ဖွဲ့ စည်းခြင်း။
အပြင်စည်းမှ တိုက်ခြင်းသည် ကျယ်ပြန့် သလောက် အန္တရာယ်လည်း များသည်။ လွတ်လပ်သော လူ့ ဘောင် အဖွဲ အစည်း၊ လူတန်းစား အဖွဲ့ အစည်းများကို တည် ထောင်ရာတွင် အားပေး ကူညီခြင်း၊ အောင်ခြေ လူတန်းစား အတွင်းသို့  စိမ့် ဝင်ပြီး လူထု၏ သာရေး၊ နာရေးများကို ကူညီခြင်း ၊ လူငယ်ကွန် ယက်များကို တူညီသော လမ်းကြောင်းများ ချပေးပြီး လက်တွေ့ဝင်ရောက် လုပ်ကိုင်စေခြင်းဖြင့် လူထု လူတန်းစားများကို ဦးဆောင် နိုင်သော၊ အောက်ခြေထု ထောက်ခံသော ခေါင်းဆောင်ကောင်းများကို မွေးမြူ ခြင်းတို့ဖြင့် တချိန်တွင် လူထု အားဖြင့် လူထု တိုက်ပွဲကို ဖော်ဆောင်ရာတွင် အတွေ့ အကြုံ ရှိပြီးသားသွေးသစ်များဖြင့်၊ လူထုအား ကိုသုံး၍တော်လှန်ရေးကို ဦးဆောင်သွားရန် အထိ ပိုင်းဖြတ်ပြင်ဆင်ထားရန် လိုသည်။
သိန်းစိန် အစိုးရသည် ရုပ်သေး အစိုးရ ဖြစ်နိုင်သလို ၊ ဗိုလ်နေ၀င်း၏ သြဇာကို ဗိုလ်သန်းရွှေ အင်အား ပြည့်သည့်နေ့ တွင် ရုန်းထွက် သကဲ့သို့ ကိုယ့် သြဇာ ကိုယ်တည်ဆောက်မည့် အစိုးရလည်း ဖြစ်နိုင်သည်။ သိန်းစိန်သည် သန်းရွှေ ၏ လူယုံဖြစ်သည်မှာ မငြင်းနိုင်ချေ။ လူယုံ ဖြစ်သည့် အတွက်ကြောင့်သာ သမ္မတ ရာထူးကို ပေးထားခြင်း ဖြစ်သည်။ သို့ရာတွင် သိန်းစိန် အစိုးရသည် အညစ်ပတ်ဆုံး၊ အရှက်တရား အကင်းမဲ့ ဆုံး လုပ်ရပ်ဖြင့် ရွေးကောက်ပွဲတွင် ဗြောင်မဲလိမ်၊ မဲခိုးသည့် စနစ်ဖြစ်သည့် ကြိုတင်မဲ ဆိုသည့် ဘယ်က ရောက်လာမှန်းမ သိ သည့်မဲများဖြင့်အတိုက်အခံများကိုတဖက်သတ်အနိုင်ယူခဲ့သည့်အပြင်ကျင်းပခဲ့သောရွေးကောက်ပွဲကိုလည်းအတိုက်အခံများက အသိအမှတ် ပြု ပေးရန်ကောက်ကျစ်စွာ ကြံ ဆောင် နိုင်ခဲ့ပေသည် မည်သို့ပင်ဖြစ်စေသိန်းစိန်အစိုးရသည်ဂုဏ်သိက္ခာမရှိသော လူထုထောက် ခံမှုမရှိသောအစိုးအဖြစ် အရှက်တရားမဲ့စွာ ရပ်တည်နေလေသည် ။ ပြည်သူများကို လူ့အဖွဲ့စည်းကဲ့သို့ ကျောင်းသားယူနီဖောင်းပေါ် တံဆိပ်တပ်ပြီး ပြည်သူကို စာအုပ်တောင် မထောက်ပံပဲ တစ်ပြည်သူလုံးပါသော ပါတီအဖြစ် ဗြောင်ကြီးပြောင်းသည်မှာ အလွန့်အလွန် ရှက်စရာ ပါတီသို့ရောက်ရသောအကြောင်းပင်ဖြစ်လေသည် ။
စနစ်တခု ပြောင်းလဲရာတွင် တရား ခံဖြစ်သွား သူများ အာဏာရှင် စနစ်မှ ဒီမိုကရေစီ စနစ်ပြောင်းလဲသွားသော နိုင်ငံများကို လေ့လာလျှင် ထိုနိုင်ငံများတွင် ဗိုလ်ကျ စိုးမိုးနေသော အာဏာရှင် ပါတီဝင်များ(သို့မဟုတ်) ပါတီဝင်ဟောင်းများနှင့် ဒီမိုကရက်တစ် အင်အားစုတို့ ရွေးကောက်ပွဲတွင် ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင် ကြရာ၌ ဒီမိုကရက်တစ်များက အနိုင်ရပြီး အစိုးရများ ဖြစ်လာကြသည်။
သို့ရာတွင် အာဏာရှင် လက်အောက်တွင် ပျက်စီး ယိုယွင်းနေသောစီးပွါးရေး၊ လူမှုရေး၊ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ တို့ကို ပထမ သက်တမ်း(၄)နှစ် အတွင်း မြှင့်တက်လာရန်မစွမ်းဆောင်နိုင်ကြချေ။ အကြောင်းမှာ အုပ်ချုပ်ရေး အတွေ့ အကြုံ နည်းပါး ခြင်းကြောင့်၎င်း၊ ပြည်သူများ၏ နိုင်ငံရေး အတွေးအခေါ်မှာ အာဏာရှင် လက်အောက် တွင် ဖိနှိပ်ခံ၊ အောက်တန်း နောက်တန်း ကျနေသည့် ဘ၀မှ ဒီမိုကရေစီ စနစ် ဖြစ်ပေါ် လာသည်နှင့် တပြိုင်နက် နေ့ ခြင်း၊ ညခြင်း၊ ၄င်းတို့ ဘ၀ တိုးတက်ပြောင်းလဲ သွား လိမ့်မည်ဟု လွဲမှားစွာ တွေး ထင်ခြင်းကြောင့် ၄င်း တို့ ထင်သလို ဘ၀ တိုးတက်မှု နှေးကွေးမြဲ နှေးကွေး နေသည်ကို တွေ့ ၇သည့်အခါ ၊ နောက်တကြိမ် ရွေးကောက်ပွဲတွင် ယခင်အစိုးရ ပါတီဝင် ဟောင်းများကို မဲပေးခဲ့သဖြင့် ယခင် ကွန်မြူနစ် ပါတီ ၀င်ဟောင်းများ အစိုးရ တလှည့် ဖြစ်လာခဲ့ပြန်ပါသည်။
သို့ရာတွင် ၄င်းတို့သည် ယခင်က အာဏာရှင် ဘ၀၌ တဖက်သတ် အာဏာဖြင့် အစိုးရ ဖွဲ့ စည်းပုံမျိုး မဟုတ်တော့ဘဲ ပြည်သူကရွေး လိုက်သည့် ဒီမိုကရေစီ နည်းအရ တက်လာ သည့် အစိုးရများ ဖြစ်လာခဲ့ကြပါသည်။ ၄င်းအချက်ကို ဆိုဗီယက်ရုရှားနိုင်ငံ၊ ပိုလန် နိုင်ငံတို့ တွင်တွေ့နိုင်သည်။
ယနေ့စစ်ဘက်မှ အသက် 20 ကျော် လူငယ်များမှ စ၍ ယူနီဖောင်း ပေါက်သည်အထိ စစ်တပ် မှ လူတိုင်းနီးပါးက
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အား ရိုသေလေးစားမှု့ လျှော့အောင် တစခုတည်းသော အပစ်ကိုထောက်ပြ ပြီး နာမည်ဖျက်ရန်ကြိုးစားကြ၏ ။
အမှန်မှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် တိုင်းပြည်မှတစ်ပြားမှမယူသော ထောင်နန်းစံခံပြီး တိုင်းပြည်တွင်ပင် ရှင်သန်လျှက်ရှိသော စပါးနှဲကဲ့သို့ပြောင်းလဲလျှက်ရှိ၏ စီးပွားရေး ပိတ်ဆို့ရန် အကြောင်းသည် သူမအား ဖိအားပေးသော အကြောင်းအရာဖြစ်သော်ငြား သူမသည် ပြည်သူလူထုအား အမှန်တစ်ကယ် အခွင့်ရေးရှိသော ၊ မှန်ကန်သော ၊ နိုင်ငံရေးစနစ်အတွက် ရင်းနှီးခြင်းသားဖြစ်လေ၏ ။ထိုသို့မဟုတ်ပါက တိုင်းပြည်မှအရာရာသည် ယနေ့ တရုတ်ပြည် ၊ စင်္ကာပူနိုင်ငံ ၊ စသော နိုင်ငံတစ်ကာ စီးပွားရေးအခွင့်လမ်းမျှော်ကိုးသော တိုင်းပြည်များရှိ စစ်အာဏာရှင်များ ၏ ငွေစာရင်း ဘဏ်အကောင့်ထဲ ရောက်မှာသေချာ၏ ။
ထိုကြောင့် စစ်တပ်မှ မည်မျှ အပုတ်ချစေကာမူ ထိုသူများသာ အပြောအဆို အဆဲဆို ခံကြရ၏ ပြည်သူက မမုန်းချေ ။
ယနေ့ ဗိုလ်သန်းရွှေ တို့က ဒီမိုကရေစီနည်းကျ ရွေးကောက်ပွဲ အမည်ခံ ကာ ပြည်သူအား မျက်နှာပြောင်တိုက် ပါတီမဟုတ်သောပါတီဖြင့် ရွေးကောက်ပွဲ လုပ်ပြီး သိန်းစိန် အစိုးရကို မွေးထုတ် ပေးလိုက်ခြင်းသည် NLD ပါတီ နှင့် ဒီမိုကရေစီ အင်အား စုတို့ အတွက် တမျိုး ကောင်းပါသည်။
သိန်းစိန် အစိုးရသည် သူ့ သက်တမ်း ၅-နှစ်အတွင်း မြန်မာ နိုင်ငံ လူမှုရေး၊ စီးပွါးရေး၊ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ တို့ကို ဦးမော့ လာစေရန် မစွမ်းဆောင်နိုင်ပါ။ ထို့ ကြောင့် ပြည်သူ လူထုကြီး၏ မကျေနပ် ချက်ကို သည်လည်း တိုး၍ လာမည်သာ ဖြစ်သည်။ သိန်းစိန် အစိုးရ နောင် ၅-နှစ်အတွင်း ရွေးကောက်ပွဲ လုပ်သည့် အချိန် အခါ မရောက်ခင် မြန်မာ ပြည်သည်အုံကြွမှုကြီးနှင့်တိုးပါလိမ့်မည်။
ထိုသို့ အုံကြွ လာသည့်အခါ NLD ပါတီ သာမက လူငယ်တိုင်းသည် မှ နောက်မတွန့် ဘဲ ဦးဆောင်နိုင်ဖို့ ယနေ့ မှ စ၍ ပြင်ဆင်ရမည်ဖြစ်သည်။ သုံး လေးနှစ်အတွင်း အတွင်း မြန်မာ ပြည် သည် ပြောင်းလဲ လာတော့မည် ဖြစ်သည်။ ဦးဆောင်သူက ရဲရဲ ဦးဆောင်လျှင်ရွေ့ နိုင်ပါသည်။
စာတစ်လုံးတွင်မှ မုသားဝါဒ မပါသောကြောင့် ရဲရဲဖတ်ပြီး လူငယ်တိုင်းအတွက် မျှဝေစေချင်သည် ။
Posted on March 1, 2011, in Cimphawng/Tuahkhak teng and tagged မလေးရှား၊ human rights, သန်းရွှေ၊, သိန်းစိန်၊ Myanmar Union, Government. Bookmark the permalink.	Leaveacomment.	← Tongsan leh Tun Tun (IC) Holimna	မြန်မာ့သတင်းစာများတွင် မပါသော သတင်းနှင့် ပုံ →	Leaveacomment